Indlela yokwenza inkqubo yakho yokulandelela i-Amazon?
Ukuba nomgangatho ophezulu wemveliso kwi-Amazon yithuba elihle kakhulu lokukhuthaza ukuthengisa kwakho njengabaxhamli abaninzi abanokufumana iimveliso zakho xa befuna isayithi. Ukubeka ngempumelelo kwi-Amazon, kufuneka ulandele ngokuqhubekayo izikhundla zakho kwaye wazi kakuhle indlela i-algorithm yokukhangela yama-Amazon isebenza ngayo.
Kukho ama-21 asezantsi amaxabiso e-Amazon. Zonke ezi zinto zingabelana ngokwahlukileyo, ukufaneleka, kunye nezilungiso zokuneliseka kwamakhasimende. Izinto zokuguqula izinga ziquka ixabiso lokuthengisa, ukuhlaziywa kwamakhasimende, uphendule imibuzo, ubungakanani bezithombe kunye nomgangatho, intengo, iimveliso zabazali, ixesha kwikhasi, ukulinganiswa kwezinga kunye nokuzaliswa kohlu lwemiveliso - atlantic paving baltimore.
Makhe sixoxe ngamanani amaninzi aguqukayo e-Amazon afunekayo ukulandelela ukukhuthaza ukuthengisa kwakho:
Ireyithi yokuthengisa yinto ebalulekileyo kakhulu yokubeka indawo echaphazela isikhundla sakho semveliso kwi-Amazon SERP. Uthengiso oluninzi lukhokelela kwizikhundla eziphezulu, kwaye emva koko izithuba eziphezulu zikhokelela ekuthengiseni okungaphezulu. I-Amazon yokuthengisa indawo okanye ngamanye amagama ama-Amazon athengisa kakhulu ukuthengiswa kwemveliso kukuthi imveliso ethile ithengiswa njani xa kuthelekiswa neminye imikhiqizo kwicandelo elinye. Abathengisi bayiqwalasela kule methrikhi ukujonga ukuba imveliso yabo iyakuthengiswa njani ngokukhawuleza kule ndawo yokurhweba. Eli nqanaba lingafumaneka kwiinkcukacha zecandelo lemveliso yamaphepha amaninzi e-Amazon.
Enye inkalo yesimo se-Amazon kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuxhaswa kwabathengi. Bobabini inani labo kunye nomgangatho bayaqwalaselwa yi-Amazon ukukhetha isikhundla semveliso. Uphononongo oluthe xa unakho, oluphezulu luya kubeka kwi-page yempembelelo ye-Amazon kwaye emva koko i-Amazon imbalo yezinto ezinokuthi zikhangele.
Ngokuphendula yonke imibuzo yabasebenzisi, ubonisa i-Amazon indlela ozijonga ngayo kweli qonga ngokukodwa, nakwi shishini lakho ngokubanzi. Ukongezelela koko, kwenza abathengi bakho bathembeke kwi-brand yakho. Imibuzo ephendulwayo ibhalwe kwi-TOP yephepha lomkhiqizo kwaye idlala indima ebalulekileyo ekuguquleni.
Ubukhulu bezithombe kunye nomgangatho
Ukwenza umkhankaso wokwenza uphumelelo, kufuneka ulandele izikhokelo ze-Amazon. Kufuneka ulayishe kuphela umgangatho kwaye uhlambe iifoto zeemveliso zakho ukuphepha ukuhlambalaza nemifanekiso evela kwiGoogle. Kufuneka usebenzise imifanekiso ephezulu ye-1000 Х 1000 yamaphikseli. Ngaphezu koko, kufuneka unikeze abathengi bakho ithuba lokusondeza imifanekiso yakho.
Kufuneka ube nexabiso lokukhuphisana kwiimveliso zakho ukukhulisa ukuthengisa kwakho kwaye ukhange abathengi abaninzi. Ngaphezu koko, yinto ebalulekileyo yokuthenga ibhokisi. Ukuba awukwazi ukubonelela abathengi bakho ngexabiso elincinci, unako ubuncinane ukuba unikezele ngokuthumela okukhululekile.
Ixesha elikwiphepha kunye nezinga lokuhlawula
Inkqubo yokubeka ama-Amazon ifana ne-Google eyodwa. I-Amazon bots iyaqwalasela ixesha eliqhelekileyo umsebenzisi achitha uluhlu lwakho kwaye ukhangele izinga lokuxhamla kwekhasi lakho ukufumana isikhundla semveliso yakho.
Uhlu lwezinto ezizaliswe ngokupheleleyo
Uhlu lwakho lomkhiqizo kufuneka luzalise ngokwaneleyo ukuba lube luphakamileyo kwiphepha lekhasi lokukhangela. Yingakho kufuneka uzame ukugqiba yonke insimi enye ukubonelela ngabaxhamli bakho abanakho ngethuba lokupasa elihle.